Muxuu ka yiri Zinedine Zidane barbarihii ay Real Madrid la gashay kooxda Elche?? – Gool FM
(Madrid) 31 Dis 2020. Tababaraha reer France iyo kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa wuxuu ka hadlay barbarihii ay xalay la galeen Elche.
Kooxaha Elche iyo Real Madrid ayaa dhibcaha ku qeybsaday Estadio Martinez Valero, kaddib markii ay ku kala baxeen barbardhac 1-1 ah, xilli ciyaartan ay qeyb ka aheyd kullamada horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday hadalada Zinedine Zidane, wareysi uu bixiyay kaddib ciyaarta wuxuuna yiri:
“Waxaan ka soo laabannay fasax, laakiin qeybtii hore waxaan helnay fursado badan oo aan ku dhalin karnay goolka labaad, laakiin marka ay soo barbareeyeen ciyaarta waxay noqotay mid aad u adag.”
“Tani waa kubadda cagta, mana awoodo inaan wax dhaho, waa inaan sii wadnaa, waa laba dhibic oo naga luntay, laakiin waa inaan sii wadnaa shaqada.”
“Qof walba waxay aheyd in qeybta labaad uu u ciyaaro sida ugu ahboon, waxaan luminay laba dhibcood, laakiin wax badan ayaa haray.”
“Waxay aheyd inaan dhalino goolka labaad qeybtii hore sababtoo ah si fiican ayaan u ciyaarnay, qeybtii labaadna wax badan ayeey nagu qaadatay, waxaan heysanay fursad qeybtii hore si aan u noqono kuwo degan, kaddib waxay dhaliyeen gool wayna na bareejeeyeen anaga, dhanka daafaca si aad u wanaagsan ayey u shaqeeyeen.”
Kooxaha Elche iyo Real Madrid oo dhibcaha ku qeybsaday Estadio Martinez Valero… +SAWIRRO